Ahraamta Aadamiga: waxa ay yihiin, sida ay u samaysan yihiin iyo taariikhdooda | Ragga Stylish
Xaqiiqdii waligaa TV-ga ma aragtay ama in jimicsi jimicsi loo diray Ahraamta aadanaha. In kasta oo aysan u ekaan karin, Ahraamta aadanaha ayaa saynis badan gadaashooda ku wata oo way adag tahay in si sax ah loo sameeyo. Oo kani waa dhisme jimicsi oo ka kooban dad taxane ah oo sameeya saddexagal. Waxay qaadataa iskuduwid badan shaqsi ahaan iyo koox ahaanba si loo saxo.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan astaamaha, dhinacyada la tixgelinayo iyo sida loo sameeyo Ahraamta aadanaha.
2 Taariikhda Ahraamta aadanaha
3 Xeerarka Ahraamta aadanaha
4 Hawlaha xubin kasta
Waxaan ka hadleynaa dhismaha jimicsiga oo dad taxane ah ay isku ururiyaan enzymes midba midka kale si ay u sameeyaan haram. Qof kastaa wuxuu u jilba joogsadaa midba midka kale ama wuxuu istaagaa garbaha qofka haya. Ahraamta aadanaha waxaa loo tixgeliyaa inay tahay isboorti bulsho iyo mootooyin. Badanaa waxay ku xiran tahay baahida loo qabo joogitaanka hal ama in ka badan oo shuraako ah oo u baahan in la waafajiyo dhammaan falalka mootadooda si loo sameeyo foomka la yiri.
Si loo sameeyo Ahraamta aadanaha waxaad u baahan tahay meel deggan oo habeysan. Tani waa sida ay suurtagal u tahay in la dhammeeyo qaar ka mid ah tirooyinka aadanaha ama Ahraamta gebi ahaanba iyada oo aan wax khatar ah u lahayn caafimaadka dadka. Waana haddii aan si sax ah loo sameynin waxaan aakhirka dhaawici karnaa nafteena tan iyo, iyadoo kaliya hal qof oo guuldareysto, ay jiidi karto dadka intiisa kale ayna joojin karto sameynta Ahraamta.
Waa isboorti iskaashi oo dhammaan acrobats waa inay lahaadaan xirfado gaar ah. Dadka oo dhami ma sameyn karaan isboorti nuucaan ah maadaama ay u baahan tahay xirfad weyn kahor. Farsamaynta farshaxanka iyo qoob-ka-shaqeynta waxaa lagu gaaraa iyadoo si joogto ah loogu dhaqmo siyaabo kala duwan Sida acrosport oo kale, waa ciyaar aan kaliya ku tababartay jimicsiga taas oo ay lagama maarmaan u tahay in la yeesho awood lagu sameeyo dhowr hawlood oo kala duwan.
Dhinac, waxaan ku leenahay saldhiga yaa ah qofka masuulka ka ah qabashada qofka kale. Dhinaca kale, tWaxaan leenahay agile ama flipper waa kuma qofka sameeya dhamaan walxaha lagama maarmaanka u ah inuu awood u yeesho dabacsanaanta iyo isu dheelitirka lagama maarmaanka u ah inuu awood u yeesho xasilloonida haramka aadanaha. Haddii aan sameyno isku-dhafnaan wanaagsan oo u dhexeeya baasaska iyo agile waxaan yeelan karnaa qaab-dhismeed wanaagsan oo awood u leh in aan sameysano Ahraamta aadanaha.
Taariikhda Ahraamta aadanaha
Noocan isboortiga acrobatic wuxuu bilaabmayaa 1973. Waa anshax lagu dari karo xiriirka caalamiga ah ee isboortiga akrobaatiga. Dhismaha Ahraamta aadanaha waxaa lagu arkay taariikhda oo dhan inay tahay ifafaale fog. Dhaqammada dadyow badan oo u hoggaansamaya diimaha kala duwan iyo siyaasado kala duwan, muujinta kala duwan ee noocan ah isboortiga ayaa lagu arki karaa inta lagu jiro isbeddelka taariikhiga ah.
Isboortiga casriga ah waxaan arki karnaa in xiriirka caalamiga ah ee isboortiga acrobatic uu leeyahay Ahraamta aadanaha oo ah nooc isboorti kooxeed oo ubaahan inuu yeesho saldhig isboorti hore shaqsi walba.
Xeerarka Ahraamta aadanaha
Isboortigaan lala sameeyay la-hawlgalayaasha waxaa ku sugnaa koox dad ah oo badan waa inaan tixgelino joogitaanka qaar ka mid ah xubno-hawleedka. Waxay ka kooban tahay oo keliya sameynta Ahraamta aadanaha sida oo kale laakiin qaabka loo dhisay. Xaaladdan oo kale, jidhku waa inuu sameeyaa hawlo dhowr ah oo si cad loo go'aamiyay. Lammaanaha ugu sarreeya ee loo yaqaan 'agile' waa inuu ka yar yahay kana fudud yahay shaqada aasaasiga ah. Sababta tani waa mid iska cad.
Sameynta Ahraamta, dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya waa in lagu soo daraa si loo helo calaamad cad oo ah in jimicsiga uu awood u leeyahay isku dheelitirka iyo leexashada. Jimicsiyada acrobatic ee ka mid ahaanshaha Ahraamta ayaa ah lagu sameeyay kooxo 2,3, 4 ama XNUMX qof ah oo tirooyinka beddelaya waxayna u xuubsiibanayaan dhismihiisa.
Layli kasta waxaa kala saara 7 garsoore oo 5 ka mid ahi mas'uul ka yihiin qiimeynta fulinta farsamada halka 2da kalena ay keenaan heerka dhibaatada farsamooyinka la soo saaray. Ma aha oo kaliya in lagu xisaabtamo qaabka loo dhisay Ahraamta, laakiin sidoo kale wada shaqeynta. 5-ta garsoore waa inay sidoo kale qiimeeyaan fulinta ficilladan si shaqsi ah ayna bilaabaan inay yeeshaan dhibco 10. Dhibcaha waa la dhimayaa maadaama qaladaad la sameeyo.
Ku. Iyaga ayaa hoos loo dhigaa iyadoo kuxiran qaabka, joogteynta iyo xakameynta nooc kasta oo dhaqdhaqaaq ah oo la sameeyay. Labada garsoore ee kale waxay mas'uul ka yihiin qiimeynta dhibka dhaqdhaqaaqa ay fulinayaan. Heerka dhibaatada farsamo kasta waxaa lagu xisaabiyaa tirada leexashada iyo waxyaalaha la soo saaray. 2. Ficillada sida caadiga ah lagu fuliyo fulinta, kan ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya waa la tirtiraa kan kalena 5. Kuwa kale ee 3 ayaa lagu daray tiradan guud waxaa lagu daray dhibcaha dhibka si loo bixiyo xukun kama dambeys ah.
Hawlaha xubin kasta
Isagu waa qofka daryeela lahaadaan dusha sare ee taageerada si boosaska kaladuwan ee kaladuwan loo sameysan karo. Laga soo bilaabo xilligii dhaqdhaqaaqa aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee lala xiriiro agile ilaa uu ka helayo booska saldhigga. Waxay kaloo leedahay hawl ku riixitaan si qofka kale uu ugu biiro qaybta ugu saraysa haramka.
Isaga ayaa mas'uul ka ah fuulida isku xidhka sare ee Ahraamta. Si tan loo sameeyo, wuxuu ku tiirsan yahay saldhigga. Dhaqdhaqaaqiisu waa inuu noqdaa mid horumarsan oo kaladuwan markuu u kaco jagooyinka sare. Dhaqdhaqaaqiisa waxaa jira luminta xiriirka dusha sare ee taageerada ka dib marka la riixo salka.
Labaduba waa inay lahaadaan xirfad horumarsan si lammaanaha uu udhaqaaqi karo dhaqdhaqaaqyadooda si aysan isu dhaawacin.
Sida aad arki karto, Ahraamta aadanaha waa wax aad u adag in la sameeyo. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Ahraamta aadanaha